अध्यक्ष ओलीले २२ सांसदलाई सोधेको स्पष्टीकरण पत्रमा के छ ? - अन्नपूर्ण टाइम्स
अध्यक्ष ओलीले २२ सांसदलाई सोधेको स्पष्टीकरण पत्रमा के छ ?
६ श्रावण २०७८ बुधबार १६:३३
काठमाडौं– नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने २२ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका छ्न्। ओलीले पठाएको स्पष्टीकरणको पत्र नेपाल पक्षका सांसदले बुझेका छन्।
नेपाल पक्ष अनुपस्थित रहेको एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले देउवालाई विश्वासको मत दिने सांसदलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार पठाइएको पत्र नेपाल पक्षका सांसदले बुधबार प्राप्त गरेका हुन्।
स्पष्टीकरण पत्रमा पार्टीबाट निष्कासन किन नगर्ने भनेर सोधिएको छ। ओलीले विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भई अपराधपूर्ण कार्य किन गरेको भनेर समेत सोधेका छ्न्।
‘पार्टीका विरुद्ध विभिन्न भेला आयोजना गर्ने, गुटगत गतिविधि सञ्चालन गर्ने र पार्टिको निर्णय विरुद्धमा आफू र अरु समेत संलग्न भई विभिन्न कार्य गर्ने गराउने जस्ता अनुशासनहीन, अराजक, अनैतिक र अलोकतान्त्रिक तरिका प्रयोग गरी विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भई अपराधपूर्ण कार्य के कति कारणले गर्नु भएको हो?’, स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ।
ओलीले पार्टीबाट निस्कासन गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न भनेका छन्। जवाफ चित्त बुझ्दो नभएमा वा जवाफ नदिएमा कारबाही हुने चेतावनी दिइएको छ।